Akụkọ - Shinva: Na-elekwasị anya na ogo dị elu
Na 17 Septemba, ndị na-ede akụkọ sitere na Daily People's, Xinhua News Agency, Central Radio na Television Station, Guangming Daily, Daily Daily na ndị mgbasa ozi ndị ọzọ nọ na Shandong, yana ndị nta akụkọ mgbasa ozi mpaghara na nke ndị ọchịchị si Mass Newspaper. Otu, Shandong Radio na ọdụ telivishọn, Shandong Business Daily na ndị ọzọ na mpaghara na obodo mgbasa ozi, banyere Shinva. Gbado anya na nsonaazụ mgbanwe nke ike ọhụrụ na ume ochie na nsonaazụ mmepe dị elu.
Ndị ọrụ mgbasa ozi gara ma gbaa ajụjụ ọnụ Shinva New na Old Kinetic Energy Conversion Theme Exhibition Hall na Shinva Pharmaceutical Equipment, Clean Technology Products na Radiological Diagnosis and Treatment Products Production Workshop, wee mee nghọta zuru ezu banyere ngwongwo mbụ nke ọrụ masịrị "Sninva Biopharmaceutical Equipment and Medical Imaging Products Industrialization Project ”na Shandong Province's New na Old Kinetic Energy Nchigharị Isi Project Library.
Wang Yuquan, onye osote odeakwụkwọ otu na onye isi njikwa nke Shinva, sooro ndị ọrụ mgbasa ozi na nleta ahụ. O mekwara ka ndị ọrụ mgbasa ozi nwee mmepe dị elu nke Shinva, ngwaahịa ndị bụ isi na teknụzụ ndị metụtara ya dị ka peracetic acid obere sterilizer a mụrụ na Shinva, onye na-eduga nnukwu oghere CT na ike eletriki na-ahụ ọkụ na China. , na plastic ampoule igwe ato na-ejuputa (BFS) nke mebiri ihe ndi ozo.
Ajuju ajuju a bu ime ka ndi mmadu mara ma mekwaa okwu nke okwu nke onye isi akwukwo General Xi Jinping na Symposium banyere Nchedo Eko na mmepe di elu na Osimiri Osimiri Yellow, ma gosiputa ihe ngosiputa ohuru na ihe bara uru nke mpaghara anyi mere iji kwalite onodu ihe nchebe na ogo dị elu na Yellow River Basin, na-eburu n'uche nnyefe ahụ. Dị ka onye nnọchianya nke ụlọ ọrụ na-apụta, Shinva agbasoro usoro atumatu nke "mwekota, mmelite na nrụzi arụmọrụ" n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-azụlite ngwaahịa ndị ọgbara ọhụrụ nke ọma, na-etinye uche na mgbanwe nke ike ọhụrụ na nke ochie, ma na-agbaso ụzọ ahụ nke mmepe di elu. Oge a ndị ọrụ igwe batara Shinva, na-elekwasị anya n'ịghọta mmepe dị elu nke Shinva.